>PITIFUL YOUTH OF BURMA (POEM) | News, Art and Ideas For Burma
>PITIFUL YOUTH OF BURMA (POEM)
Filed under: OTHERS' POEMS — Nyo Gyi @ 1:00 am
ကျွန်တော်တို့ နှလုံးခုန်သံဟာ… ဖျတ်လတ်သန်မာနေသလောက်…
ကျွန်တော်တို့ နှလုံးသွေးတွေက.. ပူနွေးနီရဲနေသလောက်..
ကျွန်တော်တို့ ..လွပ်လပ်သန့်စင် စွာ..မရယ်မောဖူးဘူး…
စိတ်ဓါတ်ချို့ တဲ့နာတွေသာ..ပြည် မှည့် ယောင်ကိုင်း နေခဲ့တယ်…။
သူရဲကောင်း ဘလက်ခ်လစ်(Black List) ဖြစ်နေခဲ့မှတော့….
ယမ်းငွေ့ … သွေးငွေ့တွေ……….ထောင်းထောင်းထ……
ကျွန်တော်တို့…..အလေးပြုရမယ့်. .စံပြပုဂ္ဂိုလ်..က ဘယ်သူလဲ…
ကျွန်တော်တို့..စိတ်အပေါက်ကနေ.. ဘာတွေကို ပစ်ချခဲ့ရမလဲ……
ဖျက်ရာ ၊ ပြင်ရာတွေ..ဗရပွ…
လူကြီးတွေ ပြော သ မျှ ဆို သ မျှ….
စောင့် … စား … မျှော် …မော ….ရ တဲ့..အရွယ်……။ ။
ကဗျာဆရာဆွန်း ဆရာဟာအရမ်းကိုတော်ပါတယ် အဲဒိံလိုကဗျာမျိုံတွေဟာကျွန်တော်တို့လိုလူငယ်တွေ များများဖတ်သင့်တယ် ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ပညာရေးစနစ်ဟာအလွန်အင်မတန်မှစပ်ဆုက်ရွန်ရှာဖို့ကောင်းပါတယ် လူငယ်တွေဟာအနာဂတ်ရဲ့ကြယ်ပွင့်လေးတွေလို့ဆိုရင် ယခုလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိလ်တွေကိုကျွန်တော်စကား လေးတခွန်းပြောလိုက်ပရစေ..မိုံးမြန်မြန်ချုပ်ကြပါတော့မိုး ချုပ်မှကြယ်လေးတွေရဲ့အလင်းရောင်ဟာပိုလို့တောက်ပ နိုင်မှာပါဗျာ…. AKW
Comment by aung ko — January 19, 2013 @ 3:24 pm